Ezona zibalo zibalaseleyo kwiVenkile yokudlala kuGoogle | I-Androidsis
Ukuba ne-smartphone kuthetha izinto ezininzi, akunjalo? Ayisiyonto yokwenza umnxeba kuphela, ukuhlala unxibelelana nabantu esibathandayo, okanye ukukhangela nje i-intanethi. Umbuzo ungaphaya koko, kuba iselfowuni inokuncediswa nayo izicelo ezahlukeneyo eziyilelwe ukuphucula nokwenza lula imisebenzi yethu yemihla ngemihla.
Ngenxa yoku, ii -apps ezahlukeneyo zenzelwe ukusetyenziswa kwethu. Zonke zikwiVenkile yokuDlala, ukongeza kweminye imithombo, enje ngeekhalityhuleyitha, izixhobo zokubala ezingabalulekanga. Ngubani ongazange abe nzima ukwenza umsebenzi onzima wokuphindaphinda? Okanye ngubani ongathandiyo ukubala? Ngaphezulu kwesinye, akunjalo? Kungenxa yoko le nto sikuzisela le posi, apho Siqokelela ezona zibalo zibalaseleyo kwiVenkile yokuDlala kuGoogle ukuze ufumane eyona uyithandayo kunye nehambelana neemfuno zakho. Masibone!
1 Isibali seGoogle
2 Ikhaltyhuleyitha ++
3 Isibali esinye
5 Isikali sokubala seTricolorCat
6 I-RealCalc Calculator yeSayensi
7 Idesktop yokubala i-Desmos
9 Ikhaltyhuleyitha yeSayensi
Ngokuqinisekileyo uyasazi esi sicelo, kwaye ayimangalisi loo nto, kuba ihlala iza kuqala ifakwe kumzi mveliso kwiifowuni ezininzi ze-Android.
Le elula, kodwa esebenzayo kakhulu yokubala, iyakwazi ukwenza imisebenzi eyahlukeneyo, apho iziseko ezine zisilela: ukongeza, ukuthabatha, ukuphinda-phinda nokwahlulahlula. Nangona ingagxili kuphela ekuphunyezweni kokubala okulula, ikwanakho ukwenza imisebenzi yesayensi, enje ngezibalo ze-trigonometric okanye i-logarithmic kunye nemisebenzi yokucacisa. Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yezona zibalaseleyo.
Ukuba ukhetho olwahlukileyo olunikezelwa ngumatshini weGoogle wokubala lubonakala lungathandeki, kwaye ufuna ngaphezulu, I-Calculator ++ lolona khetho lubalaseleyo. Le app iza neendlela ezimbini ezahlukeneyo: Umgangatho kunye neNjineli. Ngokucacileyo, ujongano lokuqala lubonisa iisimboli ezisisiseko kunye neenketho ezahlukeneyo zokwenza izibalo ezilula ngenqanaba eliphantsi lobunzima. Kwelinye icala, kwimowudi yeenjineli, sinako ukwenza ukubala ngokuguquguqukayo kunye nokuqina, amaqhezu, amabinzana e-algebra, kunye nokunye. Ikwasombulula, iingcambu, amandla, iipesenti, kunye nemisebenzi ye-trigonometric.
I-Calculator ++ nayo ikwazi ukwenza ngokwezifiso kakhulu. Singongeza kwaye sisuse imisebenzi, kunye nokutshintsha umxholo kunye nokujongana nothando lwethu.
Umthuthukisi: USergey Solovyev
I-Calculator enye, enye inketho ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa ujonge enye yeekharityhulam ezilungileyo ezikhoyo kwivenkile kaGoogle. Lolu hlelo lokusebenza oluhle kakhulu luhlangabezana neziseko, kodwa kunye nokunye okuninzi.
Ngale nto inomdla "Sombulula konke" Siya kuba nakho ukwenza imisebenzi elula ye-arithmetic, ukudityaniswa okuqinisekileyo, i-trigonometric, ukubala kwe-matrix, i-RPN kwaye, ukongeza, ibonisa iigrafu zemisebenzi, ukuguqula iiyunithi zemilinganiselo kunye nokunye. Ngaphandle koko, ngokubhekisele kwinqanaba lokwenza ngokwezifiso, sinokuwutshintsha umbala womxholo ukuthanda kwethu.
Ikharityhulam enye -Ikhaltyuletha
Umthuthukisi: UPierfrancesco soffritti
I-ClevCalc yinto enomdla wokubala eyinxalenye yekhathalogu yeGoogle Play Store. Ngayo sinokwenza imisebenzi emininzi eya kusivumela ukuba senze imisebenzi esisiseko kunye nobunzima. Ukongeza koku, inesiguquli secandelo, imali, izaphulelo, ixesha lehlabathi, i-GPA (umndilili wesikolo) kwaye, kwabafazi, ngaphezulu kwayo nantoni na, ikharityhuleyitha ye-ovulation. Ngaphandle kwamathandabuzo, yinkqubo epheleleyo kakhulu. Kodwa ayisiyiyo yonke loo nto, ikwanayo nekhaltyhuleyitha yezempilo, ipetroli yezithuthi, irhafu yokuthengisa kunye nokunye!
ClevCalc - Isibali-manani
Umthuthukisi: Imbuyekezo Cleveni Inc.
Isikali sokubala seTricolorCat
Ukuba ujonga ukubala ngokwezifiso isixhobo esizalisekisa injongo yaso, I-TricolorCat Calculator sisicelo esihle kakhulu esinemixholo eyahlukeneyo onokukhetha kuyo. Inemibala eyahlukeneyo kunye neendawo zokuyila: Izinto -I-Indigo, ebomvu, Luhlaza, Amber, Pinki, Brown / Original - Mnyama, Mhlophe, Luhlaza, Luhlaza, Bomvu, namthubi. Sinokuphinda senze okanye singasebenzi ukungcangcazela ekuchukumeni.
Iyafumaneka ngohlobo lwayo lwasimahla okanye oluhlawulelwayo. Umahluko kuphela phakathi kwezi zimbini kukuthengisa. Eyokuqala inebhanari ekuboniswa kuyo iintengiso ezahlukeneyo, ngelixa iapp ehlawulwayo ingenawo umxholo wentengiso, oqhele ukubangela ukucaphuka okukhulu kwabanye abasebenzisi.
ixabiso: € 0,79
I-RealCalc Calculator yeSayensi
Esona sibali sikhulu sokubala ekuhlanganiseni, ngokucacileyo. Nangona siyongeze kuluhlu lwezizathu ezininzi ezilungileyo: ukukhanya okugqithileyo, ngaphandle kwentengiso yalo naluphi na uhlobo, kulula kwaye kusebenza kakhulu. I-RealCalc Scientific Calculator ine-infinity yemisebenzi engasayi kusishiya sibaleka xa sisenza izibalo. Ngayo sinokufumana iziphumo zomsebenzi olula kunye nobunzima ngaphandle kwembuyekezo enkulu. Singayifaka kwifowuni kwiinguqulelo ezimbini ezahlukeneyo: enye yasimahla, ngaphandle kwendleko, kwaye enye ihlawulwe. Eyesibini idibanisa imisebenzi emininzi, njengoko kulindelwe, esinokuthi siyisebenzise kwimisebenzi yethu.
Umthuthukisi: Isoftware yekota
Idesktop yokubala i-Desmos
Ukuba into yakho kukwenza ukubala ngemizobo, kuba ufundela ubunjineli okanye omnye umsebenzi apho kubalulekile ukwenza olu hlobo lwemisebenzi, okanye nangasiphi na isizathu esilula, I-Desmos Graphing Calculator sisibali sokubala esipheleleyo, ilungele ukuxhasa ezinye izixhobo eziphambili. Ngayo sinokufumana amagophe, iiparabolas, imigca kunye nezinye iziphumo esiza kuzifumana ngokwazisa amaxabiso ukufumana oko sikufunayo. Ukongeza, ikwayinto yokubala elula kunye neyenzululwazi ngaxeshanye. Kufanelekile ukuba ukhankanye ukuba awudingi unxibelelwano lwe-Intanethi.
Umthuthukisi: Idesmos Inc.
I-CALCU sisibali sokubala esinokubamba ngezandla. Le app ixhasa umsebenzi weSamsung yeewindows ezininzi. Ukongeza, ikuvumela ukuba ungeze imixholo eyahlukeneyo yangasemva, kuba inokwenzeka ukuba ibe yeyakho! Enye ikhalityhuleyitha, ngaphandle kwamathandabuzo, kufanelekile ukuyizama.
CALCU ™ Isikali sokubala
Umthuthukisi: Izixhobo zokubala zoYilo
I-Calculator yeSayensi yi-calculator ye-retro kwisitayile seRealCalc Scientific Calculator. Esi sixhobo sinoyilo olufana ncam nolwesibini olukhankanyiweyo kwaye, ngokwemisebenzi yayo, banokwabelana ngokubala okufanayo. Nangona kunjalo, sisibali sokubala esigqibeleleyo esiya kuthi ngokucacileyo sihambise oko sikuthembisayo. Ikwavumela ukwenziwa ngokwezifiso.
Isayensi yokubala kunye
Okokugqibela, ikhalityhuleyitha nganye inento eyahlulahlula. Ukuba sifuna into elula, ikharityhuleyitha kaGoogle iya kuba lolona khetho lufanelekileyo. Ukuba sifuna isixhobo esinamandla ngakumbi, esisebenza ngokucacileyo, esinomdla okanye esinokwenziwa ngokwezifiso, ezinye iindlela zezona zilungileyo ekufuneka ziqwalaselwe.
Ukuba uyazi enye ikharityhulam ephawuleka kakhulu efumaneka kwiVenkile yokuDlala, zive ukhululekile ukuyikhankanya kumagqabantshintshi ukuyongeza kwisithuba. Kwakhona, ukuba unazo naziphi na izimvo malunga nezi zicelo, zilungile okanye zimbi, zive ukhululekile ukuba wabelane ngazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezona zibalo zibalaseleyo kwiVidiyo kaGoogle